Prati, imwe yenzvimbo dzakanakisa muRome | Absolut Kufamba
maruuzen | | Updated on 18/06/2021 00:11 | Roma
Roma iguta diki rinogona kuongororwa netsoka. Kufamba kuburikidza nenzvimbo dzayo zhinji kunokurudzirwa pane zuva rine zuva, saka parwendo urwu haugone kupotsa runako uye runonakidza. vavakidzani Prati.
Prati inzvimbo inozivikanwa nenzvimbo dzayo, zvivakwa zvayo zvakanaka uye yayo european runako. Iine hunhu hwakawanda, zvinoita senge Paris, saka regai tione nhasi zvatingaite pano.
2 Chii chekushanyira muPrati
Ndiyo Makumi maviri-echipiri chikamu cheRoma uye jasi rayo remaoko rinosanganisira Mausoleum yeHadrian, imwe yenzvimbo dzayo dzinomiririra (kunyange hazvo iri yaBorgo). Asi ndeipi nhoroondo yenharaunda inoyevedza yeRoma?
Zvinoita sekudaro munguva dzehushe hweRoma nyika idzi dzaitorwa neminda yemizambiringa nemakwenziNekudaro, yakadaidzwa kuti Horti Domitii, uye yaive yemukadzi waDomitian. Gare gare yakachinja zita rayo, rave Prata Neronis, uye munguva dzeMiddle Ages yainzi Prata Sancti Petri kana iwo masango eSan Pedro.
Nzvimbo iyi yakaramba iri yakasvibira kusvika panosvika kupera kwezana ramakore rechiXNUMX, pakati pemakwenzi, matope nenzvimbo dzekufudza sezvo painge paine mamwe mapurazi ipapo, kunyanya kumateru eMonte Mario. Asi mu 1873 iye zvino muridzi weichi chikamu chikuru chenyika, Xavier de Mérode, akasaina kondirakiti nemasipala kutanga kuumba dunhu idzva. Makore gumi akapfuura kusvikira zvivakwa zvekutanga zvaona chiedza.
Nekudaro, iyo nharaunda yakaramba iri kumahombekombe kwenguva yakareba sezvo pakange pasina zvivakwa zvakanaka uye zvaiita kunge zvakasarudzika. Muchokwadi, Mèrode pachake akabhadhara muhomwe yake mabasa ebhiriji resimbi kuvhura nzira dzekutaurirana. Paingova pakutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri iro guta parakatanga kushandira kugadzirisa matambudziko edhorobha. Sei? Chaizvoizvo pano mahofisi ehutongi ehumambo nyowani yeItaly akavakwa.
Kurongeka kwemigwagwa kwakagadzirwa nehumwe hunyanzvi: chii kubva kune mumwe wavo Basilica yeSan Pedro yaigona kuonekwa. Panguva iyoyo, hukama pakati peVictoria nehurumende nyowani hwaive husiri hwakanakisa, saka kwete mugwagwa kana nzvimbo yakatenderedza pano ine zita repapa kana vasande.
Iwo matsva mabasa aisanganisira kuzadza ivhu, kuti asatambura mafashama eRwizi rweTiber, asi zvaive zvisiri nyore kana nekuda kwekunyorovesa kusagadzikana kwenyika. Asi, zvakadaro, zvivakwa zvitsva zvakatanga kubuda sehowa, zvese mukati mehafu yekutanga yezana ramakore rechimakumi maviri uye nemigwagwa yakaenzana.
Migwagwa mikuru yePrati ndiyo Via Cola di Rienzola Via Ciceronela Marcantonio Colonna neLepanto. Iyi migwagwa yose ndiwo moyo waPrati. Kuenda kuchamhembe nharaunda inogumira Della Vittoria, kumabvazuva nenzvimbo yeFlaminio, kumaodzanyemba nePonte uye kumadokero neTriininfale.
Chii chekushanyira muPrati
Paunenge uchifamba migwagwa uye zvikwere zvakatumidzwa nehunhu hwehumambo hweRoma uri kuenda kunoona zvimwe zvakanaka zvivakwa senge imba yedare uye akanaka Adriano Theater. Iyi yemitambo yakavhurwa muna 1898, nhasi inoshanda seinema uye iri muLa Piazza Cavour.
Kune iro chikamu, Muzinda weJustice wakavakwa pakati pe1888 na1910 uye unofungidzirwa chivakwa chikuru, chimwe cheakakosha mushure mekuzivisa kweRoma seguta guru rehumambo hweItari. Nekuda kwehunhu hwenzvimbo iyi, iine hunyoro hwakawanda, yaifanirwa kupihwa nheyo dzakasimba dzakasimba dzekongiri dzakagara kusvika makore makumi manomwe ezana ramakore makumi maviri apo yaifanira kusimbiswazve. Zviri baroque uye yekuzvarwa patsvaIwo ari 170 metres ne155 metres uye ese travertine limestone.
Prati inzvimbo yakanyarara, imwe sarudzo yakanaka kana iwe usiri kuda kumhanya. Yakanyatso kubatana kune rimwe guta, asi ichiri pekugara uye yakadzikama. Kunyange inzvimbo yakachengeteka zvikuru, sezvo kunyangwe isina kuzvarwa neropafadzo yeVatican, pekugara kwaPapa kuri padyo kwazvo.
Saka chinhu chakanakisa chaungaite muPrati ndeche famba, urasike munzira dzaro. Iwe unogona kutanga kubva kuVatican pachayo, shanyira St.Peter's Basilica kana iyo Vatican Museums uye wotanga kufamba. Nekudaro, iwe unomhanyirawo mu Chechi yeMoyo Unoyera weSuffrage, inozivikanwawo seMilan Cathedral mune diki nekuti ine yakanaka neo-Gothic façade.
Pano mukati inoshanda iyo Museum yeMweya yeMweya yePurigatori, kwasviba, nemifananidzo yevakafa ... Kereke yakavakwa muna 1917. Mukati mune zvakare nhengo yakanaka.
El Nhandare yeOlympic Izvo zvakare zviri muPrati. Yakavhurwa muna 1953 kunyangwe nhoroondo yayo yakadzokera kuma20s sezvo paive nenhandare diki yechifascist munzvimbo iyoyo. Pano mhemberero yekuvhura nekuvhara ye1960 Olimpiki yeZhizha yakaitwa uye yakagadziridzwa zvachose ye1990 Fifa Cup uye zvakare, muna2008.
Mugwagwa wakanakisa wekutenga muPrati ndeye Via Cola Di Riezo. Iwe uchaona tambo dze zvitoro zvezvipfeko, zvitoro zvidiki uye maresitorendi. Ivo vane mitengo iri nani pane iri muzinda wenhoroondo, saka iri imwe nzira yakanaka yekuchengetedza mari. Vagari vavo? Vanyori, mabharani, vanhu vane mihoro yakanaka nekuti Ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzehupfumi muRome. Ive nekuchenjerera, usafunge kuti inzvimbo inozivikanwa zvikuru ine kufamba kwakawanda, aiwa, zvirokwazvo inharaunda iri kunze kwedunhu revashanyi uye dzimwe nguva kunyangwe vaRoma havauye pano.
Hongu, hongu, iri padyo neSt.Peter's Basilica neVatican, asi vashanyi havawanzoishanyira. Uye avo vanosvika vanongofamba vachitevedza Via Cola di Renzo, iyo inotarisisa zvitoro. Asi kana iwe uchida zvimwe, iwe unofanirwa kumbofambira mberi zvishoma. Semuenzaniso, kupa iyo Viale Giulio Cesare nzvimbo, one marudzi mazhinji emadzinza uko vanhu vanobva kumativi ese epasi vanogara pamwe chete.
Zviripachena, kune maArabu nemaIndia mazhinji pano, nezvitoro zvavo zvinoenderana. Uye kana iwe uchironga kufamba kuburikidza neItaly kune yakanaka chitoro chemabhuku, Yekushanya Kirabhu, iyo ine zvese kune vafambi pakati pevatungamiriri nemamepu. Iyo Dea Roma chifananidzo chinotitambira isu mu Risorgimento Bridge. Yakagadzirwa nemuvezi wePolish Igor Motoraj uye ane chiso chakasuruvara uye chine rudo.
Kufambawo uchaona akawanda Umbertino dhizaini zvivakwa, Randinenge mukupera kwezana remakore rechiXNUMX Italian maitiro uye vazhinji Art-Nouveau dhizaini dzimba. Kune zvakare rationalist dhizaini zvivakwa, kubva panguva yaMussolini, uye zvimwe zve maitiro erococo. Zviripachena kuti kunewo zvimwe zvivakwa zvemazuva ano, zvakaita sechivakwa cheRAI, zvese zvakagadzirwa negirazi uye magirazi, kana iyo yaimbova manisiparati, chivakwa chine hutsinye che1973 icho nhasi chine mawindo ane mavara kwazvo. Uyo ane mifananidzo yauri kutora!
Imwe yezvikamu zvePrati ndeye Delle Vittorie, dunhu rakarongwa muna 1919 iyo inonyanya kuwanikwa mu kutenderedza Piazza Mazzini uye inozivikanwa nedzimba dzakavakwa munguva yechiFascist, iine zvivanze zvakavhurika. Pazvivakwa zvese izvi zvatakatumidza zita kusvika parizvino, usarasikirwa nezvakanaka chaizvo mumikova, mahwindo nemabhalconi.
Kana uchida kuchovha bhasikoro muPrati mune dzimwe nzira dzemabhasikoro kubvira Viale Angelico kuenda kuCastel Giubileo, imwe nzvimbo yemuguta kuchamhembe kweRoma. Iko kufamba kwakanaka kunofamba nemumahombekombe erwizi uye kunorasika musango rakavhurika kana chii chingave chiri mumaruwa eRoma. Imwe bhasikoro nzira inotanga panguva imwechete asi inoenda kwete kure, kuPiazza Cavour.
Kune nzvimbo dzakasvibira here muPrati? Zvakanaka, hapana mapaki akakodzera anoyeuka ayo akazaruka apfuura neminda yemizambiringa. Iko kune mahombekombe erwizi, iyo bhasikoro nzira nedivi rake rinova iro vanhu vanowanzofamba kana kumhanya uye kwete zvimwe zvakawanda. Zvichida bhawa rakavanzika padyo nemahombekombe kana muchikepe.
Prati inogona kunge isiri nzvimbo inozivikanwa kwazvo muRome asi rega ndikuudze izvozvo kana ukaenda munaAugust ndiyo nguva yakanakisa yezvose. Chaizvoizvo, chero nguva pakati paChikunguru 1 naSeptember 7 inguva yakanaka, nekuti mamiriro ekunze akanaka, kune vanhu mumigwagwa vanofamba, unogona kushanyira Museum yeCastel San't Angelo husiku hwezhizha, famba nepakakwira- simuka mugwagwa weBorgo Passetto, uko Pope akapotera kubva kuVatican kuenda kunhare, uye kuyemura dome reSt. Anokosha.
Kuti uite kufamba uku unofanirwa kubhadhara asi uine tikiti rakafanana unogona kushanyira nhare uye dzimba dzayo dzakanaka uye mapatio kana kukwira kutepisi uye unakirwe nemaonero ayo anoshamisa epanoramic.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Prati, imwe yenzvimbo dzakanakisa muRome